ANC's 50th Congress | Christine Nesbitt Photo
The African National Congress (ANC) 50th conference held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997.
South African musicians Soweto String Quartet pose for a photo on a zebra crossing in Soweto, South Africa.
Order The African National Congress (ANC) 50th conference is held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order Thabo Mbeki speaks at the African National Congress (ANC) 50th conference held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order A performer is seen during the opening ceremony of the African National Congress (ANC) 50th conference is held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order Jacob Zuma, on the right and Thabo Mbeki, on the left, are seen during the African National Congress (ANC) 50th conference held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order Nelson Mandela, on the right and Thabo Mbeki, on the left, are seen during the African National Congress (ANC) 50th conference held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order Nelson Mandela isseen during the African National Congress (ANC) 50th conference held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order Thabo Mbeki is seen during the African National Congress (ANC) 50th conference held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.
Order Performers are seen during the opening ceremony of the African National Congress (ANC) 50th conference is held in Mafikeng (Mahikeng) in the North West Province of South Africa in December 1997. At the Conference Thabo Mbeki was elected the new President of the ANC.